Repoblika… demokratika - ewa.mg
News - Repoblika… demokratika
Tsy ilaozan’izay mamalan-kira
amin’ny politika. Tsy izy, tsy mahavoa… ? Na manao fanahy iniana.
Tsy sahy, tsy matoky tena… Ambentin-dresaka tamin’ity herinandro
ity ny hoe Repoblika. Tsy ifandovana ny fitondram-panjakana,
amin’ny alalan’ny fifidianana andraisan’ny olom-pirenena anjara ny
fanomezam-pahefana izay mitondra. Nefa misy minia mamalan-kira,
mitompo teny fantatra ho hany manana ny marina sy mety ary mahasoa
Tsy mety handray anjara amin’ny fifidianana: ahoana, hanao inona… ?
Tsy hita izay ilazana sy itsarana azy amin’izay lazainy sy ataony.
Ny fifidianana no ahazoana mametraka azy amin’ny toerana sahaza sy
mety aminy amin’izay tanjany sy izay vitany. Ny toy izany no
mandringa na mamalan-kira ka izay mandray andraikitra indray no
tsaraina hoe tsy ho marin-toerana na mandeha ila.
Voaresaka tato ho ato koa ny hoe demokrasia. “Fitondran’ny vahoaka,
avy amin’ny vahoaka, ho an’ny vahoaka”, hoy ny filohan’i Etazonia
teo aloha izay, i Abraham Lincoln. Avy amin’ny vahoaka izany, izy
no mampandeha azy ary ho an’ny tombontsoany. Mila mitondra izay
mahasoa ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka ny hoe
fahalalahana maneho hevitra? Fa tsy fanehoan-kery ho tsy resy
tohika, manana ny marina…
Mifandrohy amin’izay demokrasia izay amin’ny tany repoblikanina ny
fanjakana tan-dalàna, ny fisaraham-pahefana, ny fifidianana fakana
fahefana, ny fahalalahana maneho hevitra, ny fitsinjaram-pahefana…
Tsy mandeha ila fa mifameno hisian’ny fahamarinan-toerana ireo.
Misy ny fahefana mpanatanteraka, ny mpanao lalàna, ny mpitsara. Tsy
efa samy nandray ny andraikitra tandrify azy ve ireo amin’izao
fifidianana loholona izao?
Tsy lavina, malalaka ny fanehoan-kevitra. Tsara henoina ary
manan-jo amin’izany izay miteny na hoe vitsy anisa aza. Saingy
mitondra inona eo amin’ny raharaham-pirenena sy ny fiainam-bahoaka
izay lazaina sy atao? Fitsikerana, fanakiviana, fanaratsiana… Tonga
amin’ny fankalahana sy fanakorontanana aza ny sasany. Tsy mety
avokoa izay mitranga sy atao rehetra?
L’article Repoblika… demokratika a été récupéré chez Newsmada.
Rugby – Lalao fihantsiana: nitsapa mpilalao vaovao ireo fileovana
Ao anatin’ny manasara-taona “inter-saison” ny baolina lavalava, amin’izao fotoana izao, miandry ny fanombohan’ny taom-pilalaovana 2019. Manararaotra io fitsaharana io ireo fileovana isan-tokony mitsapa ireo mpilalao vaovao heveriny fa hanatevina azy ireo. Nisy, araka izany, ny fihaonana nisedrana azy ireo, ny alahady lasa teo tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina. Fileovana iray ny nanao izany, ny STM (Savony), mieritreritra ny haka an’i Claudio sy i Christian (Vorinofo). Nikatroka tamin’ny Cnaps Sport, mbola ao anatin’ireo fifantenana ny mpilalao handrafitra azy, koa ny Savony, tamin’io. Nivoaka mpandresy, tamin’ny isa 12 no ho 8, ny klioban’ny Tranom-piahiana.Ankoatra izay, niatrika ny FTM Manjakaray (Dakar), tompondakan’ny ranomasimbe Indianina 2018, ihany koa ny UIRC, nohatevenin’ireo mpilalaon’ny Uscar, toa an-dry Radadatoa sy ry Toussaint ary ry Aina. Nampakatra ireo zandry mpandimby kosa, tetsy ankilany, ny Dakar. Nivoaka mpandresy, tamin’ny isa tery 27 no ho 25, ny FTM Manjakaray. Niady ny fihaonana teo amin’ny roa tonta, ary nahitana endri-dalao mahafinaritra. Nitarika, tamin’ny isa 12 no ho 3, ny Dakar, teo am-pialan-tsasatra.Nanokatra ny fihaonana ny lalao ho an’ny vehivavy. Mbola noporofoin’ny SCB Besarety indray ny maha andrarezina azy, nanamontsana ny FTFA, tamin’ny isa mavesatra 31 no ho 10. Tompondaka L’article Rugby – Lalao fihantsiana: nitsapa mpilalao vaovao ireo fileovana a été récupéré chez Newsmada.
Tao anatin’ny efa-taona nitondrana an’i Madagasikara, nambaran’ny Filohan’ny Repoblika Malagasy nandritra ny fifampiarahabana nahatratry ny taona 2018, teny Iavoloha fa nihena 18 % ny Malagasy miaina ao anatin’ny fahantrana. Nidina ho 70 izany raha 92 % teo aloha. Iza avy ireo niala tao anatin’ny fahantrana ? Ao anatin’izany ve ireo mahantra teny ambany tonelina, teny amin’ny « la réunion kely » izay nozarain’ny Filoha Hery RAJAONARIMAMPIANINA fanomezana tamin’ny faran’ny taona ? Amin’izao an-katoky ny fifidianana Filohampirenena izao, nilaza ny Filohampirenena fa hanomboka hijery ny olan’ny rano any Atsimo, hampiditra jiro amin’ny alalan’ny angovo azo havaozina, isan-tokantrano izy. Omby elektronika Mirongatra hatrany ny halatra omby eto Madagasikara. Vahaolana hitan’ny Filohampirenena Malagasy ny fametahana « puce électronique » ny omby mba hanaraha-maso azy. « Hatomboka ihany koa izany », hoy izy. Teny filamatra an’ny fitondram-panjakana amin’ity taona 2018 ity ny fitohizan’ny fisandratana. Lynda A. Cet article FILOHAMPIRENENA HERY RAJAONARIMAMPIANINA : 70 % sisa ny taham-pahantran’ny Malagasy est apparu en premier sur déliremadagascar.
Cliquez pour agrandir L’article Nécrologie du 26 août 2020 est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Nécrologie du 26 août 2020 a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Nanaovan’ny Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) fanadihadiana manokana ny tontolon’ny indostria eto Madagasikara. Ny fifandraisan’ny sehatry ny fambolena sy ny indostria. Mila politika mazava ny fifandraisan’ny roa tonta.Momba ny politikan’ny indostria, tsy hita taratra loatra ny fifandraisan’ny seha-pihariana momba ny fambolena sy ny fambolena, amin’ny seha-pihariana momba ny indostria. Amin’ny ankapobeny, 15 % amin’ny harinkarena faobe ny entin’ireo seha-pihariana roa mitambatra ireo tato anatin’ny 10 taona farany. Tanjona avy ammin’ny fanadihadiana nataon’ny FES ny hampiakatra izany ho 25 % amin’ny harinkarena faobe amin’ny taona manaraka. Mila politikan’ny indostria mafy orina anefa izany.Hita tamin’ny fanadihadiana, mifanohitra tanteraka amin’ny akora fototra misy eto an-toerana ny fanafarana entana voahodina avy any ivelany, toy ny menaka, ny siramamy, ny savony, ny vokatra ronono, sns. Akora fototra avy amin’ny fambolena sy ny fiompiana ireo rehetra ireo. Maro anisa rahateo ny Malagasy miasa amin’izany, hatrany amin’ny 8 tapitrisa ha ny tany azo volena. Manambara izany fa karazany tsy misy na tsy ampy ny fifandraisana eo amin’ny sehatry ny fambolena sy ny indostria.Tsy ahitana fiantraikany amin’ny fampandrosoana ny toekarena ny seha-pihariana iray mandeha irery. Ny indostria, tsy maintsy miankina amin’ny famatsiana ny vokatra avy amin’ny fambolena sy fiompiana; ary miankina amin’ny fisian’ny indostria ny lalam-barotra manjifa ny vokatra avy any ambanivohitra.Navoitra tamin’ny fanadihadiana ny fifandraisana eo amin’ny sehatra roa tonta, nofaritana, nahoana ny indostria no mifamatotra amin’ny fambolena sy fiompiana? Azo alain-tahaka ny fandaharanasa momba ny indostria amin’ny firenena sasany aty Afrika. Jerena ny efa misy eto an-toerana; ary volavolaina ny politika tokony hanatanterahana izany mazava.R.MathieuL’article FES – Fampandrosoana: mila politika mampifamotitra ny fambolena sy ny indostria a été récupéré chez Newsmada.
Nitondra fanazavana, omaly, ny minisitry ny Indostria, ny varotra, ny asa tanana (Mica), Rakotomalala Lantosoa, momba ny fiakaran’ny vidim-bary sy ny PPN amin’ny ankapobeny. Nambaran’ny minisitra fa efa miditra amin’ny vanim-potoana maitsoahitra isika izao, efa lany koa vokatra eto an-toerana. Raha jerena, miakatra 50 Ar ny kapoakam-bary, salanisa, fa indrindra miankina amin’ny antony maro samihafa ny vidin’entana ilaina andavanandro.« Marina fa mitotongana 10 % ny sandam-bola Ariary fa miezaka ny fanjakana amin’ny fifampiresahana amin’ireo mpandraharaha mifehy izany. Ny menaka, ohatra, hafarana 100 % nefa tsy miakatra ny vidiny. 10 % ihany ny vary hafarantsika, ary manana politika momba izany ny fanjakana. Mihena ny hafarantsika amin’ity taona ity, manodidina ny 240 000 t raha 285 000 t tamin’ny taon-dasa », hoy ny minisitra. “Misy ny ezaka ataon’ny minisiteran’ny Fambolena”, hoy ihany izy.Ohatra nambaran’ny minisitra Rakotomalala Lantosoa ny vidin’entana any amin’ny faritra Androy sy Anosy, miditra ao amin’ny seranan-tsambon’i Ehoala. Mpandraharaha dimy monja ny mamatsy ireo faritra ireo, ampahany be indrindra 75 % ho an’ny faritra Anosy. Olana ny faharatsian’ny lalana, ny fahalaviran’ny toerana … Miteraka masonkarena hafa tafiditra ao amin’ny vidin’entana ireny rehetra ireny. Ny mpivarotra koa, amin’ny maha mpivarotra azy, tsy maintsy maka tombony.Zon’ny mpanjifaNa izany aza, manara-maso ny minisitera mpiahy (Mica), ny mpitandro filaminana sy ireo tompo’andraikitra any an-toerana, satria misy ihany ny mpanararaotra mampiakatra ny vidin’entana, mitahiry tsy mamoaka ny tokony hamidy, na koa mivarotra entana efa lany andro tsy araka ny fahasalamana. Ao koa ireo mpivarotra tsy mametraka vidin’entana, voararan’ny lalàna. Mila hajaina ny zon’ny mpanjifa.Manamarina ireo rehetra ireo fa mifampiankina ny fambolena, ny fiompiana sy ny indostria (Zahao lahatsoratra eo ambony). Tanjona amin’izany ny hisian’ny fahavitantena sakafo, hampihena araka izay tratra ny fanafarana entana avy any ivelany. Manjifa ny vita malagasy.R.MathieuL’article Vidin’ny PPN: antony maro ny fiakaran’ny vidim-bary a été récupéré chez Newsmada.